दैनिक राशिफल वि.सं. २०७६ कार्तिक २६ गते मंगलबार, ई.सं. २०१९ नोभेम्बर १२ - Sutra TV - Digital News Portal Sutra TV
मेष : स्व-सुधार परियोजनाहरूले धेरै प्रकारको फाइदा हुनेछ, तपाईंले आफ्नो बारेमा राम्रो र विश्वस्त महसुस गर्नुहुनेछ। तपाईंमा छिट्टो पैसा कमाउने इच्छा हुनेछ। परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुहोस्। तपाईंले उनीहरूलाई ध्यान दिनुहुँदैछ भन्ने महसुस गराउन उनीहरूको आनन्द र दुःखमा आफैलाई संलग्न गराउनुहोस्। तेस्रो व्यक्तिको हस्तक्षेपले तपाईं र तपाईंको प्रिय बीच तनाव सिर्जना गर्नेछ। नयाँ परियोजना र खर्चमा रूचि नलिनुहोस्। तपाईं परिस्थितिबाट भाग्नु भयो भने, त्यसले तपाईंलाई साह्रै नराम्रो तरिकाले पछ्याई रहनेछ। तपाईंको वैवाहिक जीवनलाई आज केही ठाउँ चाहिन्छ।
वृष : खुल्ला खाना खाँदा विशेष सावधानी लिनुपर्छ। यसको लागि तपाईंले अनावश्यक तनाव नलिनुहोस् किनकि यसले मानसिक तनाव मात्र दिनेछ। अरूलाई प्रभावित पार्न धेरै बढी खर्च नगर्नुहोस्। आकस्मिक परिचितहरूसँग आफ्ना व्यक्तिगत विषयहरू साझा नगर्नुहोस्। प्रेमी जीवन थोरै कठिन हुन सक्छ। तपाईं प्रमुख जमीनको सम्झौता राख्ने र मनोरञ्जन परियोजनामा धेरै मान्छे समन्वय गर्ने स्थितिमा हुनुहुनेछ। आज तपाईंले गरेको स्वयंसेवक कार्यले तपाईंले सहयोग गर्नहरूलाई मात्र नभएर तर तपाईंले थप आफैलाई सकारात्मक रूपमा हेर्न पनि मद्दत गर्नेछ। आज तपाईंलाई आफ्नो जोडीको कारण समस्यामा परेको महसुस हुन सक्छ।
मिथुन : मित्रहरूले तपाईंलाई कोही विशेष व्यक्तिसँग परिचय गराउनेछन् जसले तपाईंको विचारमा केही उल्लेखनीय प्रभाव पार्न सक्छ। एउटा नयाँ आर्थिक सम्झौता तय हुनेछ र नयाँ पैसा प्राप्त हुनेछ। घरमा छोराछोरीले अनुपात बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न गरेर तपाईंलाई समस्यामा पार्नेछन्, कुनै पनि कदम चाल्नु अघि तथ्य प्रमाणित गर्नुहोस्। प्रेममा भएको निराशाले तपाईंलाई निरुत्साहित गर्ने छैन। आज तपाईंलाई गलत साबित गर्न मन पराउने एउटा लुकेको शत्रु हुनेछ। आज तपाईं पूर्ण रूपमा राम्रो विचारको हुनुहुन्छ र तपाईंका रुचिका गतिविधिहरुले आफुले आशा गरेभन्दा धेर लाभ गराउने छन्। तपाईंको जोडीले तपाईं कुनै मुड नभएको बेला वा भएको बेला बाहिर जानको लागि हुत्याउनाले तपाईंलाई रिस उठ्नेछ।
कर्कट : दिन व्यस्त भए तापनि स्वास्थ्य ठीक रहनेछ। आफ्नो खर्चमा अप्रत्याशित वृद्धिले तपाईंको मनमा शान्ति हुनेछैन। सामाजिक कार्यक्रमहरू प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग आफ्नो तालमेल सुधार गर्न सही मौका हुनेछन्। आज कार्डमा रोमान्टिक प्रभाव बलिया छन्। व्यापार सभाहरूमा फरासिलो र भावनात्मक नहुनुहोस्, तपाईंले आफ्नो बोली नियन्त्रण गर्नु भएन भने सजिलैसँग आफ्नो प्रतिष्ठा बिगार्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो प्रतिष्ठामा हानि गराउने मान्छेसँगको सङ्गत गर्न रोक्नुहोस्। तपाईं र तपाईंको जोडीलाई आज अचम्मको समाचार प्राप्त हुन सक्छ।
सिंह : तपाईंको यो आध्यात्मिकताको मद्दत लिने उचित समय छ किनकि मानसिक तनाउलाई प्रतिआक्रमण गर्ने सबै भन्दा राम्रो विकल्प हो। ध्यान र योगले तपाईंको मानसिक दृढता बृद्धि हुनेछ। अचल सम्पत्तिमा लगानी गरे राम्रो हुनेछ। तपाईंलाई प्रेम र हेरचाह गर्ने मान्छेको साथ दिन केही गुणस्तर समय बिताउनुहोस्। आनन्दको लागि नयाँ सम्बन्ध बनाउन तत्पर हुनुहोस्। अझै पनि कामको खिचलोले तपाईंको मन बेह्रेको छ र परिवार र साथीहरूको लागि कुनै पनि समय निस्किन सकेको छैन। तपाईंले आफ्नो सम्पत्तिमा लापरवाह गर्नुभयो भने हानि वा चोरी हुन सक्छ। लामो समय पछि, तपाईं र तपाईंको जोडीले कुनै झगडा र तर्क बिना केवल प्रेम साथ शान्तिमय दिन बिताउनु हुनेछ।
कन्या : आज तपाईंसँग आफ्नो स्वास्थ्य र शरीर सुधारका कामहरू गर्न प्रशस्त समय हुनेछ। तपाईंले आज राम्रो पैसा कमाउनुहुनेछ तर, यसलाई आफ्नो हातबाट खस्न नदिने प्रयास गर्नुहोस्। आफ्नो परिवारलाई उचित समय दिनुहोस्। तिनीहरूलाई तपाईंले ध्यान दिनुहुन्छ भन्ने महसुस गराउनुहोस्। तिनीहरूसँग आफ्नो गुणस्तरको समय बिताउनुहोस्। गुनासो गर्ने कुनै पनि मौका नदिनुहोस्। प्रेमीहरूको पारिवारिक भावना अत्यधिक विचारशील हुनेछ। काममा र घरमा हुने दबावले तपाईंलाई रिसाहा बनाउन सक्छ। आज तपाईंले चाहेका कुराहरू नहुने दिन हो। यो दिन तपाईंका वैवाहिक जीवनको सबै भन्दा राम्रो दिन हुन सक्छ।
तुला : रक्तचाप विरामीहरुले खासगरी आफ्नो स्वास्थ्यको अतिरिक्त ध्यान राख्नुपर्छ। तपाईंलाई नयाँ वित्तीय लाभ प्रदान गर्न केही महत्त्वपूर्ण योजनाहरू कार्यान्वयन गरिनेछ। परिवारका सदस्यहरूको मद्दतले तपाईंको आवश्यकतामा ध्यान दिनेछ। आफ्नो प्रियको निष्ठामा शङ्का नगर्नुहोस्। आज आराम गर्नको लागि केही समय पाउनुहुनेछ, तर बाँकी रहेका कामले तपाईंलाई बस्न दिनेछैन। आफ्नो तालिकामा अन्तिम मिनेटको परिवर्तनहरूको कारणले तपाईंका यात्रा योजनाहरू सर्न सक्छन्। यो दिन तपाईंका वैवाहिक जीवनको सबै भन्दा राम्रो दिन हुन सक्छ।
वृश्चिक : आफ्नो शारीरिक स्वास्थ्य सुधार गर्न संतुलित आहार खानुहोस्। अनियोजित स्रोतबाट पैसा लाभ हुनाले आजको दिन उज्यालो हुनेछ। तपाईंको जोडी मद्दतगार र सहयोगी हुनेछ। प्रेमले एक ठाउँमा उभिए तापनि तपाईंलाई नयाँ संसारमा घुमाउन सक्छ। यो तपाईं रोमान्टिक यात्रामा जाने दिन हो। तपाईं कुनै पनि क्षेत्रमा संलग्न भए तापनि, महिला सदस्यहरूले तपाईंको सफलतामा एउटा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्नेछन्। तपाईंको चुम्बकीय व्यक्तित्वले तपाईंलाई उज्यालोमा राख्नेछ। तपाईंलाई आफ्नो सम्बन्ध त्याग गर्नु झैं लाग्ने धेरै झगडाहरू हुनेछन्। तर, त्यति सजिलै सम्बन्ध त्याग नगर्नुहोस्।
धनु : अगाडि राम्रो समय आउँदैछ भनेर खुशी हुनुहोस् र तपाईंलाई अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त हुनेछ। अचानक धनको लाभ हुनाले तपाईंको बिल र तत्काल खर्च पूरा गर्नेछ। तपाईंको अत्यधिक ऊर्जा र अथाह उत्साहले अनुकूल परिणाम ल्याउनेछ र घरेलू तनाव सुधार्नेछ। तपाईं आज मितिमा जाने हो भने, विवादास्पद मुद्दाहरू नउठाउनुहोस्। नयाँ कुरा सिक्ने तपाईंको प्रतिभा उल्लेखनीय हुनेछ। केही कानुनी सल्लाह लिनको लागि वकीलसँग भेटघाट गर्ने राम्रो दिन। आज तपाईंले आफ्नो जोडीलाई कतै घुमाउन लिएर जानु भयो भने, तपाईंहरूको सम्बन्ध अझ राम्रो हुनेछ।
मकर : स्वस्थ रहनको लागि आहार नियन्त्रणमा राख्नुहोस् र नियमित व्यायाम गर्नुहोस्। बचाएको पैसा अचल सम्पत्तिमा निवेश गर्नुपर्छ। समस्या घर अगाडि नै बढ्दैछ, यसैले तपाईंले ध्यान दिएर बोल्नु पर्नेछ। रोमान्सले तपाईंको हृदय र मनमा शासन गर्नेछ। आफ्नो काम र आफ्नो प्राथमिकतामा ध्यान दिनुहोस्। तपाईंले आफ्नो सम्पत्तिमा लापरवाह गर्नुभयो भने हानि वा चोरी हुन सक्छ। वैवाहिक जीवनको एउटा कठिन चरण पछि, तपाईंले आज रमाइलो दिन पाउनु हुनेछ।
कुम्भ : स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ। तपाईं अरूको लागि बढी खर्च गर्न चाहनु हुनेछ। जवानहरूले स्कूल परियोजनाहरूको लागि केही सल्लाह माग्न सक्छन्। काम बाँकी भए तापनि रोमान्स र सामाजिकताले तपाईंको मनलाई शासन गर्नेछन्। नयाँ परियोजना र खर्चमा रूचि नलिनुहोस्। बाँकी रहेका समस्याहरू छिट्टै नै समाधान गरिनु पर्ने छ र तपाईंले कहींबाट सुरु गर्नु पर्नेछ भनेर याद गर्नुहोस्, त्यसैले सकारात्मक विचार लिएर आजैबाट प्रयास सुरु गर्नुहोस्। तपाईं आफ्नो जोडीको प्रेम पाउन इच्छुक हुनुहुन्छ भने, आज यो इच्छा पूरा हुनेछ।
मीन : एउटा मित्रले तपाईंको खुल्ला मन र सहिष्णुता शक्तिको परीक्षण गर्न सक्छ। तपाईंले आफ्नो मान आत्मसमर्पण गर्नु हुँदैन र हरेक निर्णयमा तर्कसङ्गत हुन होसियार हुनुपर्छ। बढी खर्च र शंकास्पद वित्तीय योजनाहरु नगर्नुहोस्। आफ्ना परिवारका सदस्यहरू प्रति तपाईंको हावी मनोवृत्तिले मात्र अनावश्यक तर्क सुरु हुनेछ र दोषारोपण ल्याउन सक्छ। कसैले पनि तपाईंको प्रेम अलग गर्न सक्ने छैन। आज तपाईंको कलात्मक र रचनात्मक क्षमताको धेरै प्रशंसा हुनेछ र अनपेक्षित पुरस्कार प्राप्त हुनेछ। होसियारीसँग हिंड्नु पर्ने दिन, आज तपाईंको हृदयभन्दा मनको बढी आवश्यकता पर्नेछ। तपाईंको जोडीले प्रारम्भिक चरणका प्रेम र रोमान्सको रिविन्ड बटन दबाउनेछ।